Tantaran'ny Matryoshka, ilay saribakoly Rosiana | Fitsangatsanganana tanteraka
Tantaran'ny Matryoshka, saribakoly Rosiana
Raha manontany tena isika hoe inona ny fahatsiarovana mahazatra mahazatra azontsika entina mody aorian'ny fitsangatsanganana any Russia, dia azo antoka fa hamaly tsy am-pihambahambana ny ankamaroantsika ny fahatsiarovana tsara indrindra dia ny matrioshka.
Io no iray amin'ireo kilalao malaza indrindra eran'izao tontolo izao, izay ho fantatrao mora foana na dia mbola tsy namangy an'i Russia aza ianao. Raha ny marina, ny lazan'izy ireo dia ny matrioshkas aza lasa marika haingon-trano sy lamaody. Inona koa, mety manana matrioshka ao an-trano mihitsy ianao ary tsy tadidinao izay nahazoanao azy.
Ireo matrioshkas dia manana fiaviana mahaliana ary misy dikany lehibe koa ho an'ny Rosiana rehefa raisin'izy ireo ho fanomezana. Raha nanontany tena foana ianao hoe inona ny tantaran'ity kilalao ity, avy aiza ny anarany ary inona no asehony, dia tsy azonao hadinoina ity lahatsoratra ity izay hamaliako ireo fanontaniana rehetra ireo.
1 Inona ireo matrioshkas?
2 Maneho inona ireo matrioshkas?
3 Ahoana no anaovana matrioshkas?
4 Avy aiza ny anarana matrioshka?
5 Inona ny tandindon'ny matrioshkas?
6 Inona ny tantaran'ny matrioshkas?
7 Tranombakoka Moskoa Matryoshka
8 Omeo matrioshka
Inona ireo matrioshkas?
Izy ireo dia saribakoly hazo izay mitazona replika marobe ny tenany amin'ny habe samihafa.. Miankina amin'ny haben'ny renim-pianakaviana matrioshka, ao anatiny dia afaka ahitantsika eo anelanelan'ny dimy farafahakeliny farafahakeliny matrioshkas, izay kely kokoa noho ilay teo aloha. Mahagaga!
Maneho inona ireo matrioshkas?
Ny matrioshkas dia misolo tena ny vehivavy tantsaha Rosiana ary sary famantarana ara-kolontsaina ao amin'ny firenena.
Ahoana no anaovana matrioshkas?
Mba hanaovana matrioshkas, ny ala be mpampiasa indrindra dia ireo izay avy amin'ny alder, balsa na birch, na dia mety ho hazo linden aza no tena be mpampiasa.
Notapahina tamin'ny hazo ny hazo tamin'ny volana aprily, izay rehefa feno safiny indrindra, ary atody mandritra ny roa taona farafahakeliny ireo hazo ireo amin'ny alàlan'ny fametahana savony ny faran'izy ireo mba tsy ho vaky ny hazo.
Rehefa vonona izy ireo, dia manapaka ny halavany mety ny mpandrafitra ary mandefa azy ireo any amin'ny atrikasa hiasa amin'ny hazo amin'ny dingana 15. Ny matrioshka voalohany vita dia ny kely indrindra foana.
Avy aiza ny anarana matrioshka?
Ny anaran'ity kilalao ity dia avy amin'ny «Matriona», iray amin'ireo malaza indrindra any Rosia taloha, izay avy amin'ny latina «mater» izay midika hoe reny. Taty aoriana ny teny "Matriona" dia namboarina tamin'ny matrioshka hanondroana ity saribakoly ity. Ireo teny hafa izay ampiasaina koa hilazana matrioshkas dia anarana toa mamushka sy babushka.
Inona ny tandindon'ny matrioshkas?
Ny matrioshkas Rosiana dia tandindon'ny fahavokarana, reny ary fiainana mandrakizay. Izany hoe, fianakaviana lehibe sy miray izay ateraky ny renim-pianakaviana zanakavavy, ity ho an'ny zafikeliny, izy ho an'ny zafikeliny ary toy izany mandra-pahatonga ny tontolo tsy manam-petra.
Tamin'ny voalohany, saribakoly vavy ihany no voasokitra, fa taty aoriana dia nisy koa sarin-dehilahy mba namita ny fianakaviana ary avy eo maneho ny soatoavina hafa toy ny firahalahiana eo amin'ny mpirahalahy. Tamin'ny fandehan'ny fotoana dia nanomboka nanao matrioshkas Rosiana koa izy ireo izay maneho ny endrika tantara na literatiora.
Inona ny tantaran'ny matrioshkas?
Voalaza fa tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX, ny mpivarotra Rosiana sy mpiaro an'i Savva Mamontov dia nanao dia nankany Japon izay nitsidihany fampirantiana zavakanto izay nahalalany ny momba ny antriotran'ny matrioshkas. Fanehoana andriamanitra fito izay iray tao anatin'ny iray hafa Fukurokuju (andriamanitry ny fahasambarana sy fahendrena) ny zokiny indrindra sy ilay nisy ny andriamanitra rehetra.
Nihazona io hevitra io i Mamontov ary rehefa niverina tany Rosia izy dia natolony an'ilay mpanao hosodoko sy Sergei Maliutin ho an'ny mpanao hosodoko mba hahafahany mamorona ny kinan'ilay Japoney. Tamin'izany fomba izany no namoronana saribakoly izay misolo tena ny tantsaha rosiana sambatra izay nandray ny zanany rehetra.
Ny kilalao dia niteraka fahatsapana tao amin'ny Fetiben'izao tontolo izao tany Paris tamin'ny taona 1900, izay nahazoany medaly alimo, ary Vetivety dia nanomboka nipoitra ny orinasa tao Russia, namokatra matryoshka amidy manerana ny firenena sy ny Andrefana. Amin'izany fomba izany dia nanjary sary famantarana ny kolontsaina rosiana izy ary fahatsiarovana be fahatongavan'ny firenena. Ny mpanao asa tanana tsirairay dia manao sokitra ny saribakoliny ary lasa kilalao sarobidy izy ireo satria entin'ny mpanangona izany indraindray.
Tranombakoka Moskoa Matryoshka
Raha ny marina dia zava-dehibe tokoa izy ireo ka ny taona 2001 dia nosokafana tany Moskoa, ny tranombakoka Matryoshka hampahafantatra ny tantaran'ireny kilalao ireny sy ny fivoarany rehefa mandeha ny fotoana.
Ity tranombakoka ity dia mampiseho ny sasany amin'ireo matrioshkas Rosiana voalohany noforonina tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX sy ny fiovan'ny endrik'izy ireo nandritra ny taona maro.
Ohatra, tamin'ny 1920 dia ny Bolshevik matrioshkas no nisolo tena ny sokajin'asa ary na ny sarin'ny "kulak" (teny iray izay nampiasaina ho fanoherana ireo tantsaha manankarena) dia navoaka ihany koa nanao satroka sy sandry nita ny kibony goavambe.
Nandritra ny fotoanan'ny USSR, ny governemanta dia te hampiorina ny internationalisme sovietika tao amin'ny matrioshkas ary ireo firenena samihafa toy ny belarosiana, ukrainiana, rosiana, sns dia nisolo tena an'ireo saribakoly ireo. Na dia miaraka amin'ny hazakazaka an-habakabaka aza dia namorona saribakoly lehibe mpanamory sambon-danitra koa tamin'ny alàlan'ny akanjo antsitrika sy roketa habakabaka manokana.
Taorian'ny nifaranan'ny USSR dia nanomboka naseho ny lohahevitr'ireo matrioshkas nizara maro sy mpanao politika malaza ary olo-malaza iraisam-pirenena samihafa.
Ny fitsidihana ny famoriam-bola dia mahaliana ny mampitaha ireo matrioshkas nentim-paharazana indrindra amin'ireo maoderina indrindra. ary koa amin'ireo tarehimarika japoney an'ny dio Fukuruma izay nanentana ny fanahin'izy ireo. Ny tranombakoka koa dia mampiseho ny fahasamihafana misy eo amin'ny matryoshka avy amin'ny faritra samihafa any Russia ary manome vaovao momba ny fiainana sy ny asan'ireo mpanao asa tanana matryoshka Rosiana malaza sy mpanao hosodoko.
Ho an'ny Rosiana dia misy dikany lehibe ny fanomezana matryoshka ho fanomezana. Rehefa misy mandray ny iray amin'ireo saribakoly ho fanomezana dia tsy maintsy manokatra ny matrioshka voalohany izy ireo ary maniry. Vantany vao tontosa dia azonao atao ny manokatra ny saribakoly faharoa ary maniry faniriana vaovao hafa. Toy izany hatrany mandra-pahatongan'ny matryoshka farany sy kely indrindra.
Raha vantany vao nosokafana ny matrioshkas rehetra, na iza na iza no mandray an'io fanomezana io dia tsy maintsy asehony amin'ny taranany ho marika fa manidina avy ao amin'ny akanim-borona izy ireo. Tamin'ny voalohany dia nataon'ny vehivavy izany. Izy ireo ihany no niandraikitra ny trano ary afaka naniry ny hitondra ny matrioshkas amin'ny zanany farany.
Izany no antony raha misy manome anao matrioshka, Voalaza ao amin'ny kolontsaina rosiana fa manome anao ny fitiavany sy ny fitiavany amin'ny endrika kilalao ianao.
Raha, etsy ankilany, ianao no hanome matryoshka ho fanomezana, ankoatry ny fandefasana an'io antsipiriany io, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny milaza amin'ny mpandray ny dikany sy ny tantaran'ny fanomezana izao fantatrao izao izany. Amin'izany no hanomezany lanja bebe kokoa ilay fanomezana ary ho fantany izay hatao amin'ny matryoshka farany sy kely indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Tantaran'ny Matryoshka, saribakoly Rosiana
Lalao sy fanatanjahantena tany Egypt taloha
Mpilalao sarimihetsika Bollywood tsara indrindra